के हुन्छ सेक्स र मदिराको सम्बन्ध ? – Everest Dainik – News from Nepal
के हुन्छ सेक्स र मदिराको सम्बन्ध ?
मदिरा र यौन, यस्ता दुई विषय हुन जसमा कमै चर्चा गरिन्छ । कतिपयले मदिरा सेवनपश्चात यौनसम्पर्क राम्रो हुने विश्वास गर्दछन् भने कतिपयले दुबैलाई नसाको रुपमा बुझ्ने गर्दछन् ।
हामीकहाँ मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यौनसम्बन्ध हुनु सामान्य विषय हो । यस्तै पुरुषहरुले मदिरा सेवन गरेको बेला यौन सम्पर्कको चाहना बढी राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर यी दुईबीचको सम्बन्धबारे बुझ्नु एकदमै जरुरी छ ।
के के हुन्छ त मदिरा र सेक्सको सम्बन्ध
उत्तेजनाहीन बनाउन सक्ने (इरेक्टाइल डिसफंक्सन)
एल्कोलहमा पाइने तत्वले रक्त प्रवाहलाई सुस्त बनाउँछ । यसबाट उत्तेजना आउने कुरामा समस्या हुन सक्छ । यसका साथै यसले एन्जियोटेन्सिन नामक हर्मोनको मात्रालाई पनि बढाउँछ । जुन इरेक्टाइल डिसफंक्सन यानि कि लिंगमा उत्तेजना नआउने मुख्य कारण बन्न सक्छ ।
बढी मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा स्खलनमा पनि ढिलाई हुने समस्या देखिन्छ । यसलाई लामो समयसम्म सेक्स गर्न सकिने अर्थमा बुझिएपनि एकातिर उत्तेजनामा कमी हुने अर्कोतर्फ स्खलन पनि ढिलाई हुने हुँदा यसले प्रतिकूल असर पार्दछ । लिंग शिथिल हुँदै जाने तर स्खलन नहुने अवस्था महिला र पुरुष दुबैका लागि तनावको विषय बन्न सक्छ ।
यौन चाहनामा बृद्धि
एउटा अध्ययनका अनुसार, सन्तुलित मात्रामा लिइने मदिराले यौन चाहना बढाउन सक्छ । यद्यपी बढी मदिरा सेवना गर्दा भने यौन क्रियाकलापमा सहभागी हुन समस्या नै पर्छ ।
अराजक यौन सम्बन्ध
मदिरा सेवनले सही प्रकारले सोच्ने क्षमतामा असर पार्दछ । यस्तो अवस्थामा यौनरुपमा उत्तेजित हुने हुँदा कैयन पुरुषले असुरक्षित यौनसम्पर्क या धेरैजनासँग सेक्समा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट यौन रोग तथा अन्य संक्रमणको सम्भावना निकै बढेर जान्छ ।
महिलाहरुलाई उल्टो असर
शराबको असर मष्तिष्कमा मात्र नभएर शरीरमा पनि देखिन्छ । बढी मदिरा सेवन महिलाहरुलाई क्लामेक्स अनुभूति गर्न अर्थात् यौनको चरमता अनुभूति गर्ने कुरामा बाधक बन्दछ । यसकारण उनीहरु कम उत्तेजित र असुन्तष्ट हुन सक्छन् ।
नीजि अंगमा असर
मदिराका कारण रक्त प्रवाहदेखि लिएर यौन आनन्दमा ध्यान दिने विषयमा पनि समस्या आउन सक्छ । यसले महिलाहरुको यौनांंग सुक्खा बनाइदिन्छ । यसबाट यौनसम्पर्क दुखदायी हुनसक्छ । नीजि अंगमा असर पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अनिच्छित गर्भ रहने सम्भावना
पुरुष जस्तै महिलाका लागि पनि मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा राम्रो सँग सोच्ने र विचार गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले बढी मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा उनीहरुले पनि यौन जोखिम उठाउने खतरा बढी हुन्छ । यसबाट संक्रमणमा पर्नुका साथै अनिच्छित गर्भ बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैले अत्यधिक मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्नु राम्रो मानिँदैन ।
ट्याग्स: Erectile Dysfunction, sex and alcohol